ဒေါင်းလုပ်ဖလက်ရှမီး | LED Torch Light က APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » ဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED Flash ကိုအလင်း
ဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED Flash ကိုအလင်း APK ကို
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖလက်ရှမီးဟာတောက်ပသည့် LED မီးရှူး flash ကိုအလင်းပါ! ဒါဟာအများဆုံးအထူးအသားပေးကြွယ်ဝတဲ့အလင်းရဲ့သာသငျသညျအစဉျအမွဲအမြန်ဆုံး, အတောက်ပ need.Get မည်, ဆုံးနဲ့ဖုန်းများ & တက်ဘလက်များအတွက်ဗီဒီယိုကင်မရာ zoom ကိုအတူကြွယ်ဝသောရှေ့အလင်း feature ဖလက်ရှမီး။ ဒီ app ကင်မရာအလင်းအဖြစ်ကိရိယာပေါ်တွင်ရှေ့ကင်မရာအလင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်၌ချဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်! အလင်းကဲ့သို့ကောင်းစွာမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပိတ်နိုင်အောင် Plus အားသင် setup ကိုတစ်ဦး timer နေရာမှာနိုင်ပါတယ်။ ထိုဒေသတွင်မှိန်အခါသင်တို့သည်လည်းသင့်ကင်မရာ zoom ကို Flash မီးအလင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်မီးရှူးတိုင်ကို flash အလင်းကိုသုံးနိုင်သည်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်!
ဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED အလင်းအားကောင်းတဲ့အလင်းကိုပေးစွမ်းသည်ပေါင်းသင်တစ်ဦးသည်အလွန်အမင်းအသုံးဝင်သောမှန်ဘီလူး (ချဲ့) ရရှိသွားတဲ့! ယနေ့စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးမှန်ဘီလူးရယူပါ! ယခုအခမဲ့ Download လုပ်!
သင်ဘယ်လိုရှေ့ကို LED အလင်းအသုံးပွုနိုငျသနညျး ကိုနညျးလမျးမြားကိုရေတွက်ပါစေ!
* Set အလင်း timer နေရာမှာ - အခန်းတစ်ခန်းဖွင့််လင်း
အနိမ့်အလငျး၌တံခါးများဖွင့်လှစ်ရန် * အသုံးပြုမှုမီးရှူးတိုင်
* မှောင်မိုက်၌ Read
အရေးပေါ်အခြေအနေကာလအတွင်း * အရေးပေါ်
* Torch Light ကခဏမြှင့်လုပ်ဆောင်
Video Zoom / မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ * တပ်ဦးအလင်း (ရှိရမည်)
မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ * strobing light Effect
* ခုတ်တီးသည်အလင်းတွင် / ပိတ်ထိန်းချုပ်ရေး
/ ပိတ်ထိန်းချုပ်ရေးတွင် * Flip စက်ပစ္စည်း
* အကွိမျမြားစှာကိုအသာပုတ်အလင်းတွင် / ပိတ်
* သတ်မှတ်မည်မိမိစိတ်ကြိုက်အလင်း Timing
* ဘက်ထရီ Indicator
အထူး Feature ကို: Flash ကိုအလင်း + Video Zoom ကြည့်ရန် (ချဲ့)
zoom ကိုအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအလင်းသုံးစွဲဖို့ဘယ်မှာ၏အနည်းငယ်ဥပမာ: တီဗီ၏ back များနှင့်ပြုပြင်ဘို့နံပါတ်စဉ်ကိုဖတ်ရှုဖို့အဝတ်လျှော်သို့မဟုတ် zoom ကိုမီးရှူးတိုင်အလင်း၏နောက်ကျောအပေါ်တံဆိပ်ဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်နေသောူပည်သူ။ အလင်းနှင့်အတူချဲ့နိုင်စွမ်းသောအရပ်တို့ကိုမရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သငျသညျအနညျးဆုံးကြောင့်နှင့်တစ်ဦးရှိရမည် feature ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အခါဖန်ခြီးမှမျးသသုံးစွဲဖို့အဆိုပါလွယ်ကူသောအလွန်အမင်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါ!
အဆိုပါလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအပြည့်အဝတက်ဘလက်များအတွက် optimized ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ပဆီမီးခွက်ကို အသုံးပြု. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျဤအစျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးမီးအိမ် (фенерче, အယ်လ် feneri) ဖြစ်ပါသည်ထင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လွတ်လပ်သော flash ကိုအလင်း app ကိုတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်နိုငျပုံကိုသိစေပါ။
အားလုံး app ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူတဦးတည်းကနေအဆင့်မြင့် features တွေတစ်တစ်တန်နှင့်သင်၏လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုကျော်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုရဖို့။ ဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED အလင်းသင်သည်သင်၏ဖုန်းရဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးထဲကအများဆုံးရရန်လိုအပ်အရာအားလုံးရှိပါတယ်။
ဒီ update ကိုအသစ်:
ဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED Flash ကိုအလင်း
13.62 ကို MB